Xildhibaan Mahad Salaad oo ku baaqay in mid loo ahaado iska difaacidda Kiinya – Kalfadhi
Xildhibaan Mahad Salaad oo ku baaqay in mid loo ahaado iska difaacidda Kiinya
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ugu baaqay Madaxweynaha iyo Reysal Wasaaraha Soomaaliya inuusan go’aanka Kiinya ku qasbin in ay kala gorgortamaan taako ka mid ah dhulka Soomaaliya, isaga oo Boggiisa Feysbuugga kusoo qoray “Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha waxaan ugu baaqeynaa in aysan u hoggaansamin cadaadiska iyo caga-jugleynta dowladda Kiinya, aysana gorgortan ka gelin taako dhulkeena kamid ah”.
Xildhibaanku waxa uu, dhinaca kale, ugu yeeray Kiinya in ay isxtiraamto madax-banaanida Soomaaliya. Waxa uu ugu baaqay in ay dhawrto nabad ku wada noolaanshiyaha gobolka. “Waxaan ugu baaqeynaa dowlada Kiinya in ay ixtiraamto midnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya, dhowrtana deris wanaagga iyo nabad ku wada noolaanshaha labada dowladood, ayna ka waantowdo faragelinta arimaha gudaha Soomaaliya” ayuu yiri Xildhbaan Mahad Salaad.
Hase ahaatee, intaas ka hor ayuu Xildhibaanku duray sida ay Xukumadda Soomaaliya u mareyso Siyaasadda Arrimaha Dibadda dalka. Waxa uu sheegay in dowlado saaxiib la ahaa Soomaaliya laga dhigay “Cadaw Koowaad” ee dalka, taas oo uu sheegay in ay horseedday in ay Soomaaliya weyso cid garab istaagta waqtiyada ay xaaladuhu ku adag yihiin. “Waxa aan ku kala aragti duwanahay waa siyaasadda majara habowsan iyo hab-dhaqanka hoggaanka dalka, laakiin dalku waa hanti aan wada leenahay, qof walibana ay waajib ku tahay in uu dhinaciisa ka difaaco” ayuu yiri Xildhibaan Mahad.
Isaga oo soojeedinaya in inta meel la iska dhigo farqiyaadka siyaasadeed ee ay Soomaalidu ku kala aragtida duwan tahay ayuu yiri “Madaxweyne Farmaajo iyo saaxiibadiis waxay ku fashilmeen maareynta siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliya mudadii labada sano ahayd ee ay xukunka joogeen, waxayna soo galeen dagaallo siyaasadeed oo qaanada cadowga koobaad ee Soomaaliya ah lagu galiyay dowlado badan oo saaxiib iyo siyaasad wadaag la’ ahaa Soomaaliya”.
Eeddaas uu Xildhibaanku sii dhex mariyey baaqiisa ah in mid loo ahaado go’aanka Kiinya ee ah hakinta xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya waa kan ay qaar ka mid ah Soomaalidu isla dhex mareyso Baraha Bulshada ay ku xiriirto. Siyaasiyiin fara badan ayaana ku fasirtay in ay Kiinya go’aankeedan ay ku dooneyso in ay qasabto Soomaaliya in ay kala hadasho murankeeda ay ku sheeganeyso Badda Soomaaliya, ka hor inta aysan Maxkamadda Cadaaladda Aduunka, oo ay horay Soomaaliya u gudbisay dacwad ka dhan ah Kiinya, ka gaarin go’aan Badda ay isku haystaan Soomaaliya iyo Kiinya.
Guddiga Dastuurka Baarlamaanka oo dadka weydiinaya nuuca xukumadeed ee ay doonayaan
Safiirka Soomaaliya ee Kiinya iyo Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda oo Muqdisho soo gaaray